Ikhamera eluhlaza kwabaqalayo Ikhamera eluhlaza yabaqalayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
USara hernandez | | Idizayini yeMifanekiso, Ukufota
Molweni nonke! Kule posi ndize kuchaza ngendlela elula nekhawulezayo yeyiphi imisebenzi ye Ikhamera eluhlaza, ukhetho lokwenza i-Photoshop kwaye olunamandla kakhulu ukuba siyayazi ukuba siyisebenzisa njani. Ngale ndlela, inyathelo lokuqala iya kuba kukufakwa kweAdobe Photoshop kwisixhobo sethu.
Ukuze sikwazi ukuhlela kwiRaw, kufuneka sidubule imifanekiso ngekhamera yethu ifomathi, okt Raw. Ukwenza oku, siya kujonga ifomathi yokudubula kukhetho lwethu lwekhamera kwaye siyitshintshe.
Ukuba ikhamera yakho isisiseko kwaye ayinayo ifomathi eluhlaza, kodwa usafuna ukudlala ngeKhamera eluhlaza, zikhona abaguquleli kwi-intanethi oko kuya kukunceda ukuba udlulise ifomathi yeefoto zakho kwiRaw okanye nakwiFotohop uqobo. Kukho ukubanakho ukuhlela kwifomathi ngaphandle kweRaw, ukusukela ukuba ngaphakathi I-Photoshop singavula ukhetho lweRef Camera, kodwa kuyacetyiswa ukuba ifomathi ibe yile ikhankanyiweyo ukuyityhila njalo ngomthamo omkhulu.
Nje ukuba iifoto zethu zibe kwifomathi oyifunayo, siya kuyithumela kwikhompyuter kwaye sikhethe ezo sifuna ukuziphuhlisa. Siyabadonsela kwi icon yeFotohop. Ikhamera eluhlaza iya kuvulwa ngokuzenzekelayo, kwaye imifanekiso yakho iya kubekwa kwicala lasekhohlo lojongano njengesiqwengana.
Izigaba ezisisiseko ekufuneka zilandelwe ukuqala:
Apha ngezantsi kwefestile yomfanekiso ngasekunene, kufuneka sikhethe indawo yombala esifuna ukuyisebenzisa, endiyicebisayo I-Adobe RGB ngokuba ngowona unamandla.
Ukutya : Sine Imenyu ephezulu apho siya kufumana kwakhona i isixhobo sokucofa. Ukuba ucinezela ngaphezulu komzuzwana, imenyu encinci enokhetho iya kuvulwa. inyathelo lokuqala lokuthathaUkuba kukho imfuneko, ukunqunqa kwisityalo akunangqondo.
Guqula isixhobo, ukulungisa umfanekiso ukuba kukho imfuneko ngenxa Ukuhanjiswa okanye efanayo, nangona iPhotohop inokusetyenziswa.
Inqanaba : Esi sixhobo sisetyenziselwa inkqubo kwinqanaba lomgangatho we ngokuzenzekelayo, ucofa isixhobo kwaye usitsalele kumgca othe ngqo onemifanekiso yethu.
Ukulungiswa kwelensiNgaphakathi kwithebhu yeprofayile, siya kukhetha iprofayile ezenzekelayo ukuze lungisa ukugqwetha kwelensiiti. Ngaphakathi kwithebhu enye kwifayile ye- Umbala wokukhethaSiza kukhetha ngokuzenzekelayo. Ukuphepha nayiphi na imibala engafaniyo ngombala enokuthi iveliswe yikhamera okanye okusingqongileyo. Okokugqibela, ngaphakathi kwithebhu yemanyuwali, sinokuzilungisa iimpazamo njengoko sibona.
Ibhalansi emhlophe: Esi sixhobo siza kusivumela susa umbala yokufota kunye nokuyithomalalisa. Esi sixhobo siluncedo kakhulu kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa, kunye nangokukhawuleza. Sinqakraza kwi-grey okanye emhlophe esinesithombe sethu okanye esinye somtya, ukwenza umfanekiso ungasebenzi kakuhle, kwaye ngenxa yoko sinokuhambisa itshathi engwevu eneeengcali ukunciphisa iifoto zakho. Uyazi ukuba ufumana iziphumo ukuba ifoto yakho ibinomzekelo, isamente epinki kwaye inyamalale kwangoko.
El iphaneli ephambili yophuhliso ine: Ubushushu bombala. Ukuvezwa, izithunzi, amagqabantshintshi, abamhlophe, abamnyama, ukucaca, umahluko, amandla, kunye nokugcwala. Ezi amanqanaba ayahlelwa ngesikhombisi sakho, ukuze ubone ngamehlo ukuba ufuna ifoto yakho ijongeke njani na. Nangona kunjalo, ubuqhetseba obuncinci ukunqanda ukuya ngaphaya kwezi zinto cinezela i-alt ngelixa uhambisa isikhombisi sokhetho, umzekelo, umboniso. Oku kuyakwenza ukuba uyazi ukuba ifoto yakho icacisiwe, okanye ngokuchaseneyo, ukuba akukho kukhanya.
Ngaphakathi Iphaneli ye-HSL, imenyu ivela kunye neenketho ze Hue, Saturation kunye nokuKhanya. Zisebenza ngokufanayo nephaneli yokuphuhlisa esisiseko, ngesikhombisi. Iluncedo kakhulu tshintsha imibala yemifanekiso ngaphandle kokusebenzisa iFotohop ngokuthe ngqo.
Uhlengahlengiso ibrashi : Le brashi yenza imaski naphi na apho ndipeyinta khonas kwifoto yethu. Xa sele utshilo imaski, sinokukhetha ukutshintsha amaxabiso esiye sawabeka izimvo kuwo ngaphambili, njenge ukubonakaliswa, umahlukonjl. Kulungile kuba iya kusetyenziswa kuphela kwindawo oyipeyintiyo ngebrashi, kwaye oku konga ixesha elininzi kukhetho kwiFotohop.
panel iziphumo, eziqulathe ukhetho kwi susa i-haze, i-vignettes, okanye ulinganise ingxolo / ingqolowa kunye ne-marbling.
Iifilitha: Zithweswe isidanga kunye nobubanzi. Basebenza njengebrashi yohlengahlengiso exoxiweyo kodwa baseta i-gradient. Isixhobo esinamandla kakhulu.
Isixhobo se Ukususwa kwe-inki. Njengoko igama layo libonisa, esi sixhobo asinabalahleko. Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwayo akukhuthazwa kule nkqubo, iziphumo azintle kakhulu.
Ukulinganiswa kwekhamera: Ngale nqwanqwa sinokukhetha iprofayile yekhamera kunye nohlobo lwenkqubo yophuhliso. Ingcebiso yam ayikokuchukumisa ezi profayile kunye nokugcina useto lwangoku olungagqibekanga lwenkqubo.
Iphaneli yenkcukacha: Apha singongeza jolisa ekufotweni, kodwa akucebisi ukusetyenziswa gwenxa okanye ukudlula irediyo, kuba iinkozo ziyavela kwaye ifoto yonakele. Ngaphakathi kweli phaneli siya kuba nayo ukhetho lokunciphisa ingxolo, esebenza kakuhle, kodwa njengoko besitshilo, asinakho ukuyigqitha njengoko inokubonwa kwaye ifoto iya konakala.
Ndiyathemba ukuba iposti iluncedo kwabo bangayaziyo iCamera eluhlaza kwaye banokuthandabuza malunga nesixhobo ngasinye! Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye iziphumo zinokuba zilunge kakhulu, ke ndiyakukhuthaza ukuba udlale ngayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ikhamera eluhlaza kwabaqalayo